Ahoana ny fomba hijerena izay rindrambaiko nosoniavin'i Apple | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iOS 8, About us
Betsaka ny olona mandao ny zavatra mandra-pahatongan'ny fotoana farany (Anisan'ireny aho). Indraindray aho tsara vintana ary indraindray tsy izany. Ny iray amin'ireo tranga kamo indrindra dia ny famerenana amin'ny laoniny ny iDevices-ko rehetra, nanomboka teo somary miadana ny fizotrany, eo anelanelan'ny kinova farany an'ny iOS alaina, iTunes mamerina ny iDevice ary avy eo dia mila maka tahaka ny rindranasa rehetra napetraka izahay. Eo anelanelan'ny sioka sy ny sodina dia maharitra adiny roa isika miaraka amin'ny hadalana.
Tsy nampitandrina mihitsy i Apple rehefa miato ny sonia firmware mametraka eo amin'ny fitaovantsika izahay raha vao nivoaka ny kinova vaovao, noho izany dia mandoa vola foana izahay manandrana mijery raha tsara vintana. Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay te-hanandrana ny kinova farany farany an'ny iOS, fa aza sahy very ny Jailbreak nefa tsy fantany raha afaka miverina amin'ny kinova taloha izy ireo, misy tranokala iray izay mampahafantatra anay ny ny kinova iOS rehetra izay soniavin'i Apple dieny izao.
Amin'izany no ahafahantsika manamarina, ao anatin'ny segondra vitsy, raha mbola te hiverina amin'ny kinova iOS taloha isika hitazomana ny jailbreak, ho ohatra akaiky kokoa. Mba hanaovana izany dia mila misafidy fotsiny ilay fitaovana izay te-hizaha ny fahafahany isika, na afaka mitsidika ny tranonkala http // ipsw.me / 8.1 mba hahitana ireo fitaovana rehetra mifanaraka amin'ny kinova farany.
ankehitriny ny kinova farany an'ny iOS dia 8.1.1 izay tsy manohana ny Jailbreak, fa na dia nandany herinandro hatramin'ny nanombohan'ity kinova farany ity aza, noho ity tranonkala ity, dia mbola afaka manamarina fa afaka miverina amin'ny kinova taloha izahay, mampihena ny iOS 8.1 hankafizantsika ny Jailbreak. Ny tranokala IPSW.me dia havaozina isaky ny minitra vitsy ka ny vaovao asehony dia saika amin'ny fotoana tena izy. Raha mpampiasa IFTTT isika dia afaka mamorona fomba fahandro rehefa misy fanovana atao amin'ny sonian'ireo kinova samihafa an'ny iOS hampahafantarina saika ny iray minitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Ahoana ny fomba hijerena izay firmware soniavin'i Apple
Andro vitsy lasa izay dia nisalasala aho. Nividy iPhone 6 izay tonga niaraka tamin'ny iOS 8.0 aho ary te hahalala raha mbola afaka mampakatra amin'ny iOS 8.1 alohan'ny hanaovana ny jailbreak (tsy fantatro raha mbola nanao sonia azy io i Apple) ary tsy nahita fampahalalana mifandraika aho afa-tsy ilay lahatsoratra tao amin'ny forum amerikanina izay nilazan'ny olona fa farafaharatsiny naharitra ora vitsy lasa izay, noho izany dia nanao risika sy fahombiazana aho, saingy tsy mampaninona ahy ny manana io fampahalalana io ho an'ny ho avy.
Misaotra Ignacio 😉
Ny famoronana fampandrenesana noho ny IFTTT avy amin'io tranonkala io ihany no tena ilaina, na dia mampandre anay aza izy ireo dia holazainay aminao 😉
Omeo dia hoy izy:
Niezaka ny manavao ny iPad mini retina 2 aho, amin'ny iOS 8.1 ary na dia misintona ny firmware mifandraika aza aho dia mahazo ny fampandrenesana ny firmware TSY mifanaraka amin'ny IDEVICE!
nahoana no hisy izany? maso efa nandramako tamin'ny rehetra!
Mamaly an'i daro
Toy izany koa no nitranga tamiko tamin'ny iPhone 5, nandefa ipsw maromaro aho mandra-pahitako izay izy, na dia tsy ilay maodely marina aza no tiana holazaina.
Efa nanamarina ve ianao fa nampidina ny ipsw an'ny maodelinao?
Eny, ilay 4 izay misy amin'ny maodely iray ihany ary avy amin'ny pejy samihafa, raha toa ka olana firmware izy ireo ary tsy misy, dia mahazo ny lesoka foana aho
Eny, manohy manasonia ny iOS 8.1 i Apple. Voamarikao ve fa ny maodelin'ny iPad dia mifanaraka amin'ny rindrambaiko alainao? Misy maodely maromaro.
Amin'io pejy io ihany dia azonao atao ny misintona ny firmware amin'ny maodelin'ny iPad.
KOOZE dia hoy izy:
NAMANA TOA IZAO I IPOD GEN 5. ARY AVY AMIN'NY BAIBOLY NO MBA https://ipsw.me/ TENY AHO FA NISORATRA EO AMIN'NY iOS 9.2.1 NY APPLE ARY TE HANENDRIKA NY IPODO FA TSY TE HANORITRA AHO, AOKA MBA HANOHANA ahy, misaotra hatrany. !!
Valio amin'i KOOZE
Fa maninona no tsy misy dictate amin'ny kitendry antoko fahatelo ho an'ny iOS?